बाबुराम भट्टराईका धेरै गल्तीले नारायणकाजीलार्इ जिताउँदैछ ! – Everest Dainik
बाबुराम भट्टराईका धेरै गल्तीले नारायणकाजीलार्इ जिताउँदैछ !
२०७४, ९ कार्तिक बिहीबार
प्रतिनिधि सभाको निर्बाचनका लागि बामगठबन्धन बाट माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ “प्रकाश” र नयाँ शक्ति पार्टीका डा. बाबुराम भट्टराई प्रतिस्पर्धामा उत्रिए सगै गोरखामा यतिबेला सवैको ध्यान केन्द्रित भएको छ । क्षेत्र नम्बर २ का जनता कसलाई भोट दिने कसलाई नदिने भन्नेमा अन्यौलमा परेका छन् ।
एकातिर पटक–पटक अबसर लिएर गोरखाका लागि थोरै भए पनि बिकास निर्माणमा थालनी गरेका डा. भट्टराई उमेद्वार बनेका छन् भने अर्को तिर तिनै भट्टराईले सधै गोर्खा प्रबेश गर्न सारा बाहुबलको प्रयोग गर्ने गरेका श्रेष्ठ यति बेला उनी संगै चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् ।
यसपटकको निर्वाचनमा जिताएर पठाएपछि मात्र गोरखाको बिकासका लागि श्रेष्ठले गरे या गरेनन् भन्ने अधिकार हामी संग हुनेछ । मत हालेर बिजयी गराए पछि मात्र श्रेष्ठको अग्नि परिक्षा गोर्खाली जनता लिन पाउनेछन् ।
यी दुई प्रतिस्पर्धी बिचको चुनाबी भिडन्तले सायद देशभरका अन्य निर्वाचन केन्द्र ओझेलमा पर्ने पक्का जस्तै भएको छ । गोरखा क्षेत्र नम्बर २ का जनता यतिबेला कुन उम्मेदवार गतिलो हो भन्नेमा अहिले दुबिधामा परेका छन् । नारायणकाजी श्रेष्ठ गोर्खाली जनताको लागी काम गर्न अबसर नपाएका नेता हुन् ।
उनले गोर्खाली जनताको लागि राम्रो काम गर्ने अबसर त पाएनन नै तर उपप्रधान तथा परराष्टमन्त्री हुदाको जिम्मेवारी हेर्दा उनि नेपालका अहिलेसम्मका परराष्ट्रमन्त्रीहरु मध्ये अब्बल पराराष्ट्र मन्त्रीका रुपमा चिनिन्छन् । श्रेष्ठ उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री हुदा दुई छिमेकी मुलुक संगको शक्ति सन्तुलन र परराष्ट्र नितिलाई बलियो बनाउन पहल गरेको बिश्लेषकहरुको तर्क छ । द्धन्दबाट भर्खरै शान्ति प्र्रक्रियामा आएको तत्कालनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माआबोदीले सत्ता सम्हालेपछि असन्तुष्ठ केही अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई नेपालको शान्ति प्रक्रियाकै धारमा ल्याउन त्यति सजिलो थिएन तर पनि श्रेष्ठले त्यसलाई सरल र कुटनैतिक ढंगबाट जिम्मेवारी बहन गरे ।
देशको अन्तरास्ट्रिय कुटनैतिक सम्बन्ध सुधार्न तिर श्रेष्ठ लागे भने गोरखाको बिकास निर्माण र योजना तर्जुमाका लागि गोर्खाली जनताले नै जितायर पठायका भट्टराई (तत्कालिन आफ्नै पार्टी भित्रका नेता) राजनितिको केन्द्रमा थिए । त्यसकारण गोर्खाको बिकास जसले गरेपनी एउटै पार्टीको लिडर हो भन्ने भ्रममा श्रेष्ठ परे । तर जब भट्टराईले चुनाब जिते उनी गोर्खाली जनताको बिकासको अपेक्षालाई लात हानेर आफ्नो ब्यत्तिगत बिकास र स्वार्थ खोज्दै हिंड्न् थाले ।
भट्टराईको त्यस्ता धेरै गल्ती गरेका छन जुन अहिले गोेर्खाली जनताले चोहर पनि माफी दिने ठाँउ छैन ।
फलत बि.स २०७० को निर्बाचन पछि गोरखा क्षेत्र नम्बर १ जनताले आफैलाई धिकार्ने बाहेक अरु बिकल्प रहेन । भट्टराईको आत्माकेन्द्रित जडसुत्रबादमा गोर्खाली जनता फस्न पुगे । त्यस लगतै नयाँ शक्ति पार्टी गठन गरेका भट्टराईले आफू सासद नभए पनि पुर्ब प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा गोरखाको बिकासमा भुमिका खेल्ने ओठे अभिव्यक्ति दिदै हिडें ।
सम्बन्धित् समाचार कि समाजसेवा गर, हाेइन भने हाेल टाइमर दलाल बन !
तर नयाँ शक्तिमा लागे पछि भट्टराईले गोर्खाका लागि बिकासमा सिन्को सम्म पनि भाचेनन बरु उल्टो बिकासका काममा कसरी जनतालाई दिग्भ्रमित पार्न सकिन्छ भन्ने तिर लागे । हुदा हुदा आफुलाई सबैभन्दा विकास प्रेमी नेता दाबी गर्ने भट्टराईले बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको काममा दोहोरो चरित्र देखाएर आयोजना निर्माणमा अबरोध खडा गरे ।
भट्टराईले एकातिर मुअब्जा वृद्धिको नाममा आफ्ना समर्थकलाई उचालेर आन्दोलन गर्न लगाए भने अर्को तिर आफु केन्द्रमा बसेर आयोजना बन्नु पर्छ भन्दै हिडे । भट्टराईको यहि दोहोरो चरित्रका कारण आज बुढिगण्डकी क्षेत्रका जनताले समयमा मुअब्जा बुझ्न पाएका छैनन् बरु उल्टै मुअब्जा बितरण गर्नुहुँदैन भनेर आन्दोलन गर्ने सरोकार समिति समेत अहिले मुअब्जा छिटो दे भन्दै आन्दोलनमा होमिनु परेको छ । आयोजना बन्ने नबन्ने आन्योलता त छदैछ ।
अनि बिकास निर्माणको काममा समेत राजनिती गर्ने नेता कसरी बिकास प्रेमी हुन सक्छ ? त्यति मात्र होइन उनी प्रधानमन्त्री हुदा “ देशलाई उनकै भाषामा मैले देशलाई जुवा खेले” भारत संग बिप्पा सम्झौता गरे जसको मुख्य उदेश्य नेपालमा बिदेशी लगानी भित्राउनु हो भने तर अहिले आयोजना निर्माणको ठेक्का चीनिया कम्पनीलाइ दिदा उनकै चर्को बिरोध किन ?
सम्बन्धित् समाचार परीक्षामा खरो उत्रन सफल स्वास्थ्यमन्त्री गगनको कार्यकाल
के भारत बाहेकको देशको लगानी ल्याउनै नहुनी हो भने भट्टराईको भारत संगको सम्बन्ध के हो? अनि यिनले आफुलाई बिकास प्रेमी म हो भन्दा अब गोर्खाली जनताले कसरी पत्याउने ? हामी गोर्खालीले बौद्धिक र भिजन भएका गोरखाको नेता भएका हिसाबले भट्टराईलाई बिस्वास गर्दा उनले सासद पदबाट राजिनामा दिएर गोर्खाली जनताले रगत र पसिना संग साटेर जिताएको मतको अपमान गरे । के यिनले कहिलै जनता संग सोधँे या आफ्ना शुभ चिन्तक सग ?
के भारत बाहेकको देशको लगानी ल्याउनै नहुनी हो भने भट्टराईको भारत संगको सम्बन्ध के हो? अनि यिनले आफुलाई बिकास प्रेमी म हो भन्दा अब गोर्खाली जनताले कसरी पत्याउने ?
आखिर कसको इसारामा यिनले गोर्खाली जनताको रगत र पसिना संग साटिएकोे मतको अपमान गर्ने दुस्साहस गरे ? यो गौण प्रश्न बनेको छ । भट्टराईको त्यस्ता धेरै गल्ती गरेका छन जुन अहिले गोेर्खाली जनताले चोहर पनि माफी दिने ठाँउ छैन । बि.स २०५२ सालमा थालनी गरेको जनयुद्धमा गोर्खाली आमाका दर्जनौ छोराछोरीले प्राणको आहुती दिदै गर्दा यिनले भन्थे “ कम्युनिष्टले मात्र सर्वहारा वर्गको रक्षा गर्न सक्छ, सर्वहारा बर्गको राज्यसत्ता प्राप्तीका लागि यो हाम्रो लडाई हो त्यसैले बर्गदुस्मनलाई परास्त गर्न रगतको बलिदान दिन परे पनि हामी पछि पर्नुहुन्न ।” तर तिनै भट्टराई आज फेरीएका छन् र भन्छन “कम्युनिष्टहरुले सिन्द्धान्त माक्सबाद लेनिनबाद र माओबाद पुरानो भयो त्यसलाई समय सापेक्ष छैन ।”
यदि त्यसो हो भने किन यिनै भट्टराईले हजारौ नेपाल आमाका छोराछोरीलाई बलिदानी दिन लगाए ? त्यसैले भट्टराईको झुटको खेतीलाई अब कसैले कदापी स्विकार गर्न सक्ने छैनन् । अब फेरि तिनै भट्टराईलाई काँध हामी कसरी थाप्न सक्छौ ? अर्को तिर श्रेष्ठले पनि गोरखाका लागि त्यस्तै कुनै महत्वपूर्ण काम त गरेका छैनन् नै तर यिनलाई भट्टराईलाई जस्तो काम गरेनन् भन्न हामि गोरखाली संग नैतिकबल छैन । किनकी यस अघिको २ पटकको निर्बाचनमा हामीले उनलाई मत हाल्न पाएनौ ।
सम्बन्धित् समाचार कुम्भकर्ण माओवादी नेताका नाममा खुला पत्र
दोस्रो संबिधान सभाको निर्वाचनमा त उनलाई पार्टीले कमजोर संगठन जहाँ थियो त्यही चुनाव लड्न पठायो त्यो पनि उनले भट्टराईको जिताउनका लागि सहर्ष स्विकार गरे । बलियो लालकिल्लामा पार्टीले भट्टराईलाई अबसर दियो । याद रहोस भट्टराईको बौद्धिकता र पिएचडीका आधारमा चुनाव जित्थे भने रुपन्देहीबाट किन पराजय भोग्नु प¥यो ? अर्को कुरा यिनै भट्टराईलाई सबिधान सभामा पार्टीले आबश्यक ठानेर २०७० को निर्वाचनमा २-२ ठाँउबाट चुनाव लडाएकै हो ।
तर यिनले त्यही पार्टीमाथी गद्धारी गरे । पार्टीलाई मात्र होइन जिताएर पठाउने हामी जनता माथी पनि सांसद पदबाट राजिनामा दिएर हामीलाई गद्दारी गरे । हामीले २÷२ पटक जिताएर पठाएकाले हामीलाई धोका दिएको पक्कै हो । यस कारण भट्टराईलाई अब न त कार्यकर्ताले नत जनताले कसैले बिश्वास गर्ने कुनै ठाउँ छैन । तर्सथ अबको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि गोरखा क्षेत्र नम्बर २ का जनताले श्रेष्ठलाई रोज्नु उत्तम हुन्छ । श्रेष्ठ सच्चा, इमान्दार र कतव्र्यनिष्ठ नेता हुन् ।
यसपटकको निर्वाचनमा जिताएर पठाएपछि मात्र गोरखाको बिकासका लागि श्रेष्ठले गरे या गरेनन् भन्ने अधिकार हामी संग हुनेछ । मत हालेर बिजयी गराए पछि मात्र श्रेष्ठको अग्नि परिक्षा गोर्खाली जनता लिन पाउनेछन् र राम्रो गरे राम्रो र नराम्रो गरे नराम्रो भन्न पाउने छन् ।
बाबुराम पोइल जान थालेको भन्दै गोर्खामा व्यापक असन्तुष्टि, जित्ने सम्भावना घट्दै
मोही माग्ने ढुंग्रो लुकाउने !, विचरा बाबुराम !
गनगने अवसरवादी बाबुरामः आफूलाई भए ठीक, नभए सबै बेठीक
१५ सीट नपाएपछि बाबुरामद्वारा बाम गठबन्धनबाट बाहिरीने धम्की